REG Engineering Co., Ltd.
CONSTRUCTION -ELECTRICAL -MECHANICAL
Applied Electrical Power
Basic Air-Conditioning Theory & Installation Practice
Civil Engineering (Estimate)
Civil Engineering (Basic Surveying)
Civil Engineering(Advance Surveying)
တန်းခွဲ တစ်ခုလျှင် အများဆုံး လူဦးရေ ၁၀ ယောက်သာ ကန့်သတ်ထားရှိပါသည်။
Uniform T-Shirt ၂ ထည်၊ စာရွက်စာတမ်းကြေး၊ Practical Material ကြေးများ ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Electrical & Air-con Course များအတွက် သင်တန်းသားတစ်ဦးလျှင် Personal Hand Tools Set တစ်စုံစီ စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
GTC, B-Tech, B.E တက်ရောက်နေသူများ၊ ကျောင်းဆင်းများ၊ လျှပ်စစ်ဘာသာရပ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများ တက်ရောက် သင့်သည့် သင်တန်းဖြစ်သည်။ Electrical Power ဘာသာရပ် လေ့လာရာတွင် လွယ်ကူမှုရှိ စေရန်၊ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရောက်ရာတွင် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန် Theroy + Practical သင်ကြား ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ သင်ထောက် ကူပစ္စည်းများ စုံလင်စွာဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း တတ်မြောက် နိုင်ရန် သင်ကြားပေးပါသည်။ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသည့် REG M & E Project များတွင် ၀င်ရောက်လေ့လာခွင့် ရရှိ မည်ဖြစ်သည်။
ပါဝင်သည့် သင်ခန်းစာများမှာ -
Basic Electrical Principle & Theory
Basic Electrical Control System
Basic Safety Principle
အမှတ် (7-A) ၊ Penthouse ၊ ချယ်ရီကွန်ဒို၊ ချယ်ရီဥယျာဉ်မြို့တော်၊ ၁၄/၃ ရပ်ကွက် သစ္စာလမ်း နှင့် သံသုမာလမ်း ထောင့် အနီး တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၉ ၇၃၀ ၄၇၇၆၈၊ ၀၉ ၃၁၁၁ ၃၄၇၃၊ ၀၉ ၇၉၉ ၈၄၆ ၇၃၂ ၊ ၀၉ ၅၁၅ ၄၂၉၉ Email : reg.regengineering@gmail.com engineering@reg.com.mm
Basic Air-Conditioning Theory & Installation
လေအေးပေးစက်များအကြောင်း အခြေခံမှစ၍ သင်ကြားပေး ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ကိုလက်တွေ့ပစ္စည်းများ စုံလင်စွာဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ကျွမ်း ကျင်တတ်မြောက်ရန် သင်ကြားပေးပါသည်။ မိမိကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ဖွင့်လိုသူများ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကုမ္ပဏီများ တွင်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများ ပညာရေးကန့်သတ် ချက်မရှိတက်ရောက်နိုင်သော သင်တန်းဖြစ်သည်။
Electrical Basic Principles
Electrical System for Air-Conditioning
REG Training Centre
Building Construction, Electrical & Mechanical Services လုပ်ငန်းများ လက်တွေ့လုပ်ကိုင်ရာတွင် အဆင်ပြေမှု ရှိစေရန်၊ လုပ်ငန်းခွင် Interview များဖြေဆိုရာတွင် အဆင်ပြေ မှုရှိစေရန်၊ Engineering ဘာသာရပ်များ လေ့လာရာတွင် လွယ်ကူမှုရှိစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ သင်ထောက်ကူပစ္စည်း စုံလင်စွာဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာများ ကိုယ်တိုင်သင်ကြား ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
REG Training Centre ၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သော REG Engineering Co., Ltd. သည် လက်ရှိ M & E Project များလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိရာ သင်တန်း တက်ရောက်သူများအား ၄င်း Project များတွင် လက်တွေ့သင်တန်းများ ပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံး၍ Test Placement & Verbal Interview အောင်မြင်ပါက အလုပ်ရရှိရန် စီစဉ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
Building Construction (Estimating)
အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ အခြေခံမှစ၍ လေ့လာချင်သူများ၊ တက်ရောက်သင့်သည့် သင်တန်း ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရမည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အရေအတွက် တွက်ချက်ပုံ ၊ ပစ္စည်းနှုန်းထားများ တွက်ချက်ပုံ များကို အခြေခံမှစ၍ သင်ကြား ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
Concept of Surveying
No. 7-A, Penthouse, Cherry Condo, Cherry Garden City, 14/3 Ward, South Okkalapa Township, Yangon, Union of the Republic of Myanmar.
+959515 4299
+959730 47768
+959311 13473
+959799 846732
Copyright ©2019 All Rights Reserved by REG Engineering Company Limited.